Waftigii Balaadhnaa Ee Heer Federaal ee Uu Horkacayay Madaxwaynaha DDSI Ayaa Maanta Kormeerkoodii Hawleed Ku Gaadhay Masharaaicaha Degmada Beercaano Ee Gobolkaasi Shabeele. - Cakaara News
Waftigii Balaadhnaa Ee Heer Federaal ee Uu Horkacayay Madaxwaynaha DDSI Ayaa Maanta Kormeerkoodii Hawleed Ku Gaadhay Masharaaicaha Degmada Beercaano Ee Gobolkaasi Shabeele.
Godey(CN) Arbaco.Jan.28.2015, sida aad wararkayagii horeba kala socoteen cakaaraNews waxaa shalayto goobo badan oo katirsan gobolka Sitii soo indho-indheeyay wafti sare oo heer federaal ah oo uu horkacayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Waftigan sare oo isugu jira madax kasocota bordhiga taageerada gaarka ah ee deegaanada, haayadaha horumarka iyo nabadgaliyada ayaa waxaa kamid ah madaxa tababarada hogaaminta EPRDF ahna Directorka gudiga taageerada gaarka ah mudane Adhisu Lagase, Lataliyaha raysal wasaaraha ee arimaha nabadgaliyada qaran mudane Tsegaye Brehe, wasiirka arrimaha federaalka mudane Shiferew T/mariam, iyo wasiiro kale oo kasocda xafiisyada horumarka ee beeraha, waxbarashada iyo caafimaadka.
Waxaa maanta galinkii hore waftiga si balaadhan oo heer sare ah loogu soo dhaweeyay gagida diyaaradaha ee Godey waftiga oo kasoo kicitimay magaalada Diridhaba ee ay taniyo shalay kormeerka hawleed u joogeen.
Madaxdan ayaa islamaanta kormeerkoodii hawleed ku gaadhay mashaariicaha waawayn ee galbeedka Godey waxaana kamid ahaa mashruuca waraabka iyo dhul-beereedka ee Beercaano. Waxayna masuuliyiintii waftiga ee heer federaal ay aad ugu farxeen islamarkaana usoo dhaweeyeen guusha iyo isbadalka looga midho dhaliyay mashruucan.
Waftiga oo kunastay Goob katirsan beeraha islamarkaana lagu maamuusay ayaa si qoto dheer u indha indheeyay sida loogu guulaysatay mashruucan waraabka ee galbeedka Godey. Xubnihii madaxda heer federaal ee waftiga ayaa sheegay in si geesinimo leh loogu guulaystay kamidho dhalinta mashruucan.
Mudane Adhisu Legase ayaa sheegay in deegaanku uu si kago'naasho iyo dadaalba leh ugu guulaystay mashruucan lagana qabtay shaqo dhiiri galin mudan. Sidoo kale wuxuu masuulku sheegay haayadaha isku dhafka ah ee heer federaal iyo heer deegaan inay dadaal dheer galiyeen hawshan maanta oo hada kahor aan la aaminsanayn in shaqadan loo qaban karo sida maanta loogu guulaystay.
Xubnihii masuuliyiinta ee heer federaal ayaa deegaanka iyo dhamaan haayadaha kahawlgala mashruucan u soo jeediyay dhiirii galin balaadhan wax qabadka cad ee taabo galka ah ee ay kasoo hoyiyeen.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isna dhankiisa uga mahad celiyay bogaadinta iyo talooyinka dhiiri galinta ah ee ay usoo jeediyeen xubnihii madaxda sare ee heer federaal. Wuxuuna madaxwaynuhu kawarbixiyay kago'naanshihii deegaanka iyo haayadaha federaalku ay kubilaabeen naqshada, ilaa iyo hirgalinta qaybaha kala duwan ee uu mashruucu kakoobanyahay isagoo aad uga mahad celiyay haayadaha federaalka iyo kuwan deegaanka ee u taagan hirgalinta mashruucan.
Waftiga ayaa Caawa u hoyday xarunta gobolka Shabeele ee magaalada Godey waxaana lafilayaa inay taniyo Jimcaha sii joogaan deegaanka.